Kadịnal Lebanọn: "Churchka nwere nnukwu ọrụ" mgbe ihe gbawara na Beirut | Ilblogdellafede
Kadinal ndị Lebanon: "Churchka nwere nnukwu ọrụ" mgbe ihe mgbawa Beirut gasịrị
Mgbe otu ihe mgbawa mere na ọdụ ụgbọ mmiri Beirut na Tuesday, Kadịnal Maronite Katoliki kwuru na Churchka dị na mpaghara chọrọ nkwado iji nyere ndị obodo Lebanon aka ịgbake na ọdachi a.
Beirut bụ obodo e bibiri ebibi. Ọdachi dakwasịrị n'ebe ahụ n'ihi ogbunigwe ahụ dị omimi nke mere na ọdụ ụgbọ mmiri ya ”, Kadịnal Bechara Boutros Rai kwupụtara, Onye isi ndị Maronite nke Antiọk na 5 Ọgọst.
Nkwupụta nke onye isi ala gara n'ihu kwuru, "Nzuko ahụ, nke hibeworo ụlọ ọrụ enyemaka n'akụkụ mpaghara Lebanon dum, nwere ọrụ dị ukwuu ọ na-enweghị ike iwere n'onwe ya."
O kwuru na mgbe ogbunigwe ahụ Beirut gasịrị, Churchka dị "na njikọta nke ndị nọ n'ahụhụ, ezinụlọ nke ndị ahụ merụrụ ahụ, ndị merụrụ ahụ na ndị a chụpụrụ na ọ dị njikere ịnabata n'ụlọ ọrụ ya".
Mgbawa ahụ, nke mere na ọdụ ụgbọ mmiri Beirut, gburu ọ dịkarịa ala 100 mmadụ ma merụọ ọtụtụ puku, ụlọ idei mmiri jupụtara. Onu ogugu onwu a gha elu karie ka ndi oru ihe mberede choro onu ogugu a akabeghi azughi onu.
Mgbawa ahụ mere ka ọkụ ahụ daa, ọkụ eletrik na-ekpukwa ihe ka ukwuu n’obodo ahụ na Tuesday na Wednesde. Mgbawa ahụ mebiri mpaghara obodo ahụ, gụnyere mpaghara ama ama ama n'akụkụ mmiri niile. Ogbenye ndị mmadụ bi na Eastern Beirut, nke bụ ihe ka ọtụtụ na Christian, merụrụ ahụ nke ukwuu n'ihi ihe ahụ gbawaranụ, nwere mmetụta kilomita 150 na Saịprọs.
Cardinal Rai kọwara obodo ahụ dị ka "ebe agha na-enweghị agha".
"Mbibi na ịtọgbọrọ n'efu n'okporo ụzọ ya, agbata ya na ụlọ ya."
Ọ rịọrọ ndị mba ụwa ka ha gbatara ọsọ enyemaka nke Lebanon, nke nọrị na nsogbu akụ na ụba.
Rai kwuru, "Amatara m gị n'ihi na amaara m ókè ị chọrọ ka Lebanon nwetaghachi ikike ọrụ ya na ọrụ mmadụ, ọchịchị onye kwuo uche ya na udo na Middle East na ụwa," Rai kwuru.
Ọ rịọrọ mba na United Nations ka ha ziga enyemaka na Beirut ma kpọọ oku ka ndị ọrụ enyemaka nọ gburugburu ụwa nyere ezinụlọ ndị Lebanọn aka "ịgwọ ọnya ha ma weghachi ụlọ ha."
Prime Minister nke Lebanon Hassan Diab kwupụtara August 5 ụbọchị ncheta mba. Ala a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n’etiti ndị Alakụba Sunni, ndị Alakụba Shia na Ndị Kraịst, ọtụtụ n’ime ha bụ ndị Katọlik Maronite. Lebanon nwekwara ntakịrị ndị Juu yana Druze na obodo okpukpe ndị ọzọ.
Ndị isi Christian rịọrọ maka ekpere mgbe ihe mgbawa ahụ gasịrị, ọtụtụ ndị Katọlik chigharịrị na arịrịọ nke St. Charbel Makhlouf, onye ụkọchukwu na hermit nke biri site na 1828 ruo 1898. Onye amara ya na Lebanon maka ọgwụgwọ ọrụ ebube nke ndị bịara ya. ili ịchọ arịrịọ ya - ma Ndị Kraịst ma ndị Alakụba.
Ndị Maronite nel Mondo Foundation biputere foto nke ndị ọcha na ibe Facebook ha na August 5 na njiri okwu "Chineke meere ndị gị ebere. Saint Charbel na-ekpe ekpere maka anyị “.
Ọmụmụ ihe na ọfịs nke network telivishọn Christian Middle East Noursat dị ihe dị ka nkeji ise site na ebe mgbawa ahụ ma "mebiri" nke ukwuu dịka nkwupụta nkwukọrịta nke onye guzobere na onye isi ala na 5 August.
Ha rịọrọ maka "ekpere siri ike maka mba anyị hụrụ n'anya Lebanon na Tele Lumiere / Noursat iji gaa n'ihu n'ọrụ ya n'ịgbasa okwu Chineke, olileanya na okwukwe".
"Anyị na-ekpe ekpere maka mkpụrụ obi ndị ihe a metụtara, anyị na-arịọ Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile ka ọ gwọọ ndị merụrụ ahụ ma nye ezinụlọ ha ike"
← Na post gara aga Gara aga post:Amaokwu Bible maka olileanya n’oge ihe siri ike nke mmadụ niile ga-amatarịrị
Ọzọ Post → Post ozo:Kedu ihe kpatara ụmụaka ji anwụ? Akụkọ banyere ndị mmụọ ozi siri ike